April 27, 2011>
ပြည်တွင်းက ဖောင့်တွေနဲ့ အင်းဝတို့ လာမယ်၊ ပြည်ပက ၀င်းမြန်မာတွေ လာမယ်။ အစုံစုံကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖောင့်တခုတည်း ပြောင်းဖတ်ချင်ရင်တော့ Kanaung Converter ကို သုံးပါ။ ဒီမှာ ယူပါ။ တချိူ့ဟာတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် အယ်ရာ ပြတယ်။
ဓာတ်ပုံက မူလပုံဆိုရင် ချဲ့ ချူံ့ ပြသနာမရှိပါ။ အင်တာနက်က ပုံတွေဆိုရင်တော့ resolution က သေးတယ်။ ၂၀၀ လောက်ရရင် အတော်ကောင်းတယ်။ ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ လောက်အထိ blow up လုပ်တဲ့ ဖိုတိုရှော့ ပလပ်ဂင်တွေ ရှာသုံးပါ။ စာသားတွေကတော့ အသေးကနေ အကြီးကို ချဲ့တာထက် နဂိုကတည်းက စာလုံး အကြီးဆိုက် ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း Illustrator မှာ သွား ရိုက်ထားပါ။ ဒါဆိုရင် ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီက အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီဆိုက်မှာ အပ်တယ် ပြောတယ်။ http://www.esigns.com/, 248 Signs, Inc DBA , 7729 Lochlin Dr, Brighton, MI 48116.
McAFee, Norton နဲ့ AVG (http://free.avg.com/us-en/homepage ) တွေ သုံးကြတယ်။ အဲသည်က ကာကွယ်ရေး ဆက်တင်တွေကိုတော့ သေချာလေ့လာပြီး ဆက်လုပ်သင့်တယ်။ ဒီအတိုင်းထည့်ထားလည်း ဗိုင်းရပ်စ်က ၀င်တာပဲ။ စပိုင်ဝဲယားကတော့ Spybot Search & Destroy (FREE!)့ို သုံးကြပါတယ်။ အဲသည်မှာ အမြဲ Update လုပ်ဖို့ရယ်၊ Immunize လုပ်ဖို့ရယ် မမေ့ပါနဲ့။ ကွန်ပျူတာကို အပတ်စဉ် Scan လုပ်ပြီး စောင့်ကြည့်ပါ။ အီးမေးတိုင်းလဲ မဖွင့်နဲ့၊ လင့်ခ်တွေ့တိုင်းလည်း မနှိပ်နဲ့။ အီးမေးတိုင်းဖွင့်တော့ ကိုယ့်ဟာတွေ ပေါ်၊ လင့်ခ်တွေတိုင်း နှိပ်တော့ ပေါ်ရုံတင်မက ဖုံးဖိလို့မရ … ဆိုတဲ့ စာချိူး ရှိတယ်။ ဒါက အသစ်စာချိူး။
အောင်သဇင် - အရှုံးကို သီးစုံထောပတ်ထမင်းနဲ့ဖုံးတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်	ငြိမ်းချမ်းအေး - လိပ်ပြာ ဖင်ပေါ်နေသလား ပြောပါ	အော်ရီဂွန်၊ ပို့ လန်းမြို့ က မြန်မာမိသားစုများရဲ့ နှစ်သစ် သင်္ကြန်ပွဲ ကျင်းပ	ဖိုးထက် - သား ဗွီဒီရို မကြည့်တော့ပါဘူး	ကာတွန်း အောင်မော် - မြင်တာနဲ့ ကြားတာ	တူမောင်ညို - ကျောင်းသားသပိတ်လှုပ်ရှားမှုထဲ မှ အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာ ထုတ်ယူရေး	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ဧပြီလ ၂၃၊ လက်ပတန်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခံ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားပြည်သူများ တရားရုံးထုတ်မြင်ကွင်း	လင်းအေးထင် - စူးစမ်းမိတဲ့ ငနုံ	ဝိဘဇ္ဇပဲ့တင်သံ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်	မိုးမခ Kindel Store
စာပဒေသာ ကောက်စာများကျနော် မြည်းသတ္တ၀ါ
မောင်ရင်ငတေ - ရောက်တတ်ရာရာအတိုအစများ ဇော်ထက်(ပျဉ်းမနား) - လက်ပံတောင်းသူ
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (191)